betalactam + tetracyclines + cefalexin combo test kit - BALLYA
Fitsapana sy vahaolana amin'ny fiarovana ny sakafo | Tel: +86 20 3947 9163
Kitapo fitsapana Covid 19
Fitsapana haingana an'ny Covid 19 Antigen
Covid 19 Fanandramana tsy miankina amin'ny Antibody ELISA
Kitapo fanandramana Covid 19 OEM
Fitsapana haingana ny takelaka
Ahoana ny fomba hanaovana kitapo fanandramana Covid 19?
Fahasalamana ho an'ny biby
Fahanana sy varimbazaha
Famaritana vokatra farany
Fitsapana ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana biby
Fitsapana ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana ny biby
BTC 3 Sensors
Betalactam + Tetracycline + Cefalexin Combo Test Kit
Ho an'ny ronono, vovo-dronono, ronono namboarina
Specs ： 96T / boaty
Fotoam-pitsapana ： 7-10 min
Fitsipika ： CN / EU / RU / US
1. Inona no atao hoe Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test?
2. Inona no atao hoe betalactam?
3. Inona no atao hoe tetracycline?
4. Inona no atao hoe Cefalexin?
5. Ny loza ateraky ny Betalactam, Tetracycline ary Cefalexin
6. Endri-javatra amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
7. Fomba fitiliana ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
8. santionany amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
9. Famerana ny faran'ny fitsapana ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo
10. Ny maha-zava-dehibe ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
11. Ireo mpiorina amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
12. Fitaovana hanaovana fanadinana Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo
13. Ahoana ny fampiasana ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test?
15. Ahoana ny fomba hanafarana ny fitsapana ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo?
Inona no atao hoe Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test?
Tri Sensor Kit, haingana ny mamantatra betalactam, tetracycline ary cefalexin residu amin'ny ronono sy vokatra vita amin'ny ronono amin'ny alàlan'ny teknolojia fiarovana-chromatography volamena colloidal. Raha vao 7-10 minitra ny valiny.
Makà teny nindramina maimaim-poana!
Inona no atao hoe betalactam?
Beta-lactams, Amides Cyclic, dia nomena anarana litera grika hanondroana ny isan'ny mpikambana ao amin'ny peratra: ny antibiotika β-lactam dia manondro karazana antibiotika marobe misy peratra β-lactam ao anatin'ny firafitry ny simika, ao anatin'izany ny penicillin sy ny vokariny, cephalosporin Bacteriocins, peratra monoamide, carbapenem ary penicillene enzyme inhibitors, sns., ary koa cephalosporins, thiomycins, ocy-lactams monocyclic ary Antibiotika β-lactams atypical hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny antibiotika rehetra izay misy ny core-lactam core amin'ny firafitry ny molekiola dia an'ny antibiotika amide β-content.
Ny firafitry ny simika an'ity kilasin'ny fanafody ity, indrindra ny fiovan'ny rojom-baravarana, dia namorona antibiotika maro samy hafa miaraka amin'ny karazana bakteria samihafa sy ny vokatra azo avy amin'ny bakteria ary ny fananana ara-panafody.
2. Mekanisma fanaovana asa
Ny fomba fiasan'ny antibiotika β-lactam dia mifanitsy. Azon'izy ireo atao ny manakana ny synthase mucopeptide amin'ny rindrin'ny sela, dia ny proteinina mamatotra penicillin (PBPs), noho izany manakana ny tsy fitambaran'ny mucopeptides amin'ny rindrin'ny sela, miteraka lesoka amin'ny rindrin'ny sela bakteria sy fanitarana bakteria.
Ankoatr'izay, ny vokatra mahafaty amin'ny bakteria dia tokony hampidirina ihany koa ny fiasan'ny bakteria, ary ny fihenan'ny mutant izay tsy misy ny autolysin dia mampiseho fanoherana. Ny biby dia tsy manana rindrin'ny sela ary tsy tratry ny fanafody β-lactam. Noho izany, ity zava-mahadomelina ity dia misy fiantraikany bakteria amin'ny bakteria ary manana poizina ambany ho an'ny mpampiantrano.
Tetracycline dia antibiotika voajanahary voajanahary izay afaka manakana haingana ny fitomboan'ny bakteria amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny fandikana ny proteinina bakteria, ary afaka mamono bakteria raha tena avo tokoa ny fifantohana.
Tetracycline dia antibiotika misy karazany maro hafa izay manakana ny bakteria Gram-positive sy ny bakteria Gram-negatif. Izy io koa dia misy fiatraikany mahery amin'ny Rickettsia, Mycoplasma, ary Chlamydia, ary spirochete sasany.
Ny tetracycline dia tsy mahomby amin'ny tazo typhoid, tuberculosis, holatra ary virus. Ny Tetracycline sy ny oxytetracycline dia nampiasaina ho antibiotika lehibe amin'ny fitsaboana anti-aretina mandritra ny fotoana maharitra ny marary.
Taty aoriana, noho ny fitomboan'ny isan'ny bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina, dia nihamalemy ny vokatry ny fitsaboana bakteria tetracycline, ary maro ny fiatraikan'ny tetracycline.
Ankehitriny dia nesorina tanteraka izy io. Ny Tetracycline dia azo ampiasaina ankehitriny miaraka amina fanafody hafa hitsaboana ny fery amin'ny fivalanana vokatry ny aretin'ny Helicobacter pylori, mycoplasma, chlamydia ary areti-mifindra rickettsia.
Tetracycline hydrochloride dia manana vokarin'ny microorganism anti-pathogenic mivelatra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny bakteria, mpiasan'ny bakteria haingana, ary misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny bakteria sasany amin'ny fifangaroana be.
Ny fomba fiasa dia ny zava-mahadomelina afaka mifatotra manokana amin'ny toeran'ny 30S subunit ny ribosome mba hisorohana ny fifandraisan'ny aminoacyl-tRNA amin'ity toerana ity, ka manakana ny fitomboan'ny rojo peptide ary misy fiatraikany amin'ny fampidirana proteinina ny bakteria na hafa zavamiaina bitika pathogenika.
Faharoa, ny tetracyclines dia mety hiteraka fiovana amin'ny fihanaky ny fonon'ny sela bakteria, noho izany ny fivoahan'ny nucleotides sy ireo singa manan-danja hafa ao amin'ny sela, ka manakana ny famerenana ADN.
Ny Tetracycline dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra ny Staphylococcus aureus, pneumococcus, Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, meningococcus, Escherichia coli, Aerobacter, Shigella, Yersinia, Listeria monocytogenes, Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, Actinomycetes, sns.
Inona ny Cefalexin?
Cephalexin dia antibiotika β-lactam ary fanafody cephalosporin. Vovoka kristaly fotsy sy somary mavo izy io; somary manitra. Izy io dia antibiotika semi-synthetic spektrum malalaka ary an'ny cephalosporins voalohany.
Ampiasaina indrindra io mba hitsaboana aretina malemy amin'ny lalan-pisefoana, lalan-dra, hoditra sy tavy malemy ateraky ny bakteria mora tohina penicillinase. Ny tranga ny mahazaka fanehoan-kevitra mahazaka penicillin mahazaka zava-mahadomelina ity dia manodidina ny 1.1%. Ny fampiharana eo an-toerana dia tena mahasosotra ary voafetra ny fitantanana tsindrona.
Cephalexin dia cephalosporin am-bava voalohany-synthetic. Ny paikadiny amin'ny asany dia ny fanakanana ny fifangaroan'ny rindrin'ny sela amin'ny bakteria amin'ny alàlan'ny fampifangaroana proteinina mitambatra penicillin (PBPs) bakteria (ny cephalexin dia mamatotra ny PBP-3), ary avy eo dia miteraka vokan'ny bakteria.
Ny spectibre antibacterial an'ny cephalexin dia mitovy amin'ny an'ny cephalothin, saingy ny fiasan'ny bakteria dia ratsy kokoa noho ity farany. Ankoatra ny staphylococci mahazaka enterococci sy methicillin, ny cocci gram-positive dia mora tohina amin'ny cephalexin.
Cephalexin dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny Neisseria spp. ary tsy dia mora tohina amin'ny gripa gripa. Misy fiantraikany amin'ny bakteria sasany amin'ny Escherichia coli sasany, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, ary Enterobacter spp hafa, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa ary Bacteroides fragilis.
Ny loza ateraky ny Betalactam, Tetracycline ary Cefalexin
Ny olan'ny fanoherana ateraky ny residu antibiotika dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fitsaboana anay amin'ny aretina mifandraika amin'ny bakteria.
Ny fanoherana ny antibiotika: ny tatitra momba ny fanaraha-maso manerantany navoakan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana tamin'ny 30 aprily 2014 dia nanondro fa bakteria fito samy hafa izay miteraka aretin'ny rà (sepsis), aretim-pivalanana, pnemonia, aretin-tratra urinary ary gonorrhea no mahatohitra antibiotika.
Ny fananana fanafody dia mihombo isan'andro. Ohatra, ny antibiotika carbapenem dia fanafody mahomby hiatrehana ny aretin'ny pnemonia Klebsiella, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny olona voan'ny aretina Klebsiella pnemonia mahazaka.
Amin'ny farany fitsaboana ny gonorrhea, ny cephalosporin amin'ny andiany fahatelo dia tsy misy fiantraikany any Austria, Australia, Canada, France, Japan, Norvezy, Africa South, Slovenia, Sweden ary ny United Kingdom. Betsaka anefa ny olona eran-tany no voan'ny gonorrhea isan'andro.
Rehefa ampidirina zava-mahadomelina ny biby, dia mivoaka amin'ny diky, urina ary excreta hafa ireo fanafody ireo amin'ny endrika original na metabolite. Ny zava-mahadomelina sisa tavela dia mavitrika hatrany amin'ny tontolo iainana, izay handoto ny zavamiaina bitika sy ny bibikely.
Ny zava-mahadomelina sasany izay manana fananana miorina dia mety mbola hisy maharitra mandritra ny fotoana maharitra aorian'ny fivoahana amin'ny tontolo iainana, ka miteraka residues ny zava-mahadomelina eo amin'ny tontolo iainana. Ny streptomycin sy oxytetracycline dia tsy mora simba eo amin'ny tontolo iainana; ny spiramycine dia mihasimba haingana amin'ny fifangaroana ambany, saingy maharitra 6 volana vao mihasimba amin'ny fifangaroana be; Ny zinc bacitracin dia mila 3 ka hatramin'ny 4 volana mba hahafoana tanteraka ny toe-piainana aerobika. Ela kokoa ny fanalam-baraka ao anaty tontolo tsy misy oxygen.
Araka ny tatitra dia mety hahatratra 69g / L ny fatran'ny erythromycin sy sulfamethoxazole ao amin'ny faritry ny rano maloto ao amin'ny fiompiana biby. Ny famoahana ireo fanafody ireo dia mandoto ny tontolo iainana ary manimba ny fandanjana ny tontolo iainana.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia niahiahy ny mpikaroka fa ny fitomboan'ny isan'ny fivontosan'ny fivontosan'ny olona dia misy ifandraisany amin'ny fandotoana ny tontolo iainana sy ny sisa tavela amin'ny zava-mahadomelina. Ny estrogen, nitrofurans, fiomanana arsenika, sns dia naseho fa misy fiatraikany amin'ny homamiadana, teratogenika ary mutagenika.
Endri-javatra amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
1. valiny famakiana 8min
2. Ny fetran'ny detection dia mamaly ny fomban'ny EU sy US FDA
3. Fitsapana tokana ho an'ny santionany kendrena rehetra
4. Na ny matihanina na ny fitaovana ilaina
5. Fandikana maso na fandrefesana habetsahana, mety amin'ny fampiasana lab sy any an-tsaha
6. Fitehirizana ny hafanan'ny efitrano
7. Tsy misy poizina ary tsy manimba
Fomba fitiliana ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test dia fanandramana immunochromatography volamena koloidaly izay mamantatra ny Beta-lactams, Tetracycline ary Cefalexin amin'ny ronono manta, vovo-dronono, ronono pasteurized ary mihaona amin'ny MRL EU. Ity kit ity dia azo ampiharina amin'ny fanandramana haingana eny an-toerana ataon'ny departemanta isan-karazany.
Santionany ho an'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
Ohatra amin'izany ny: ronono manta, vovo-dronono, ronono pasteur.
Famerana ny faran'ny fitsapana ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
Ny LOD dia mety miova arakaraka ny fepetra takiana na ny tsy fitovian'ny santionany, azafady mba jereo ny torolalana kit ho an'ny antsipiriany misimisy.
Ny maha-zava-dehibe ny test Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo
Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test dia afaka manampy ny mpanamboatra, ny masoivoho mpanara-maso ary ny maso ny kalitaon'ny vokatra ary manampy ny olombelona hiaro ny fahasalamany.
Ireo mpiorina amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
1. Reagent Micro-Well: 8 fitsapana / fantsona, fantsona / boaty 12
2. Test Strip: 8pcs / fantsona, 96pcs / boaty
3. Torolàlana: 1 pc
Fitaovana fanadinana Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test
1. Tube santionany
2.	Pipette & Tip Pipette
3. Fako tsara
Ahoana ny fampiasana ny Betalactam Tetracycline Cefalexin Combo Test?
1. Asio ronono 200ul ao anaty lava-drano, avy eo alefa pipet ambony sy ambany mandritra ny 10 heny mba afangaro tanteraka ilay santionany amin'ilay reagent ao anaty fantsakana.
2. Avy eo atsofohy mandritra ny 3min.
3. Atsofohy ao anaty micro-well ilay fantsom-panandramana pad ohatra voatsoboka tanteraka.
4. Rehefa afaka 5 minitra dia vakio ny valiny.
Fony antibiotika no nampiasaina voalohany tamin'ny olombelona dia noheverinay ho "panacea" izy ireo. Raha mbola mihombo ny olan'ny fanararaotana antibiotika, dia nitondra fahavoazana lehibe ho an'ny olombelona ihany koa ny fanoheran'izy ireo.
Noho izany, amin'ny fiainana isan'andro dia tokony hialantsika ny sakafo misy residu antibiotika. Ny dingana voalohany hanampiana ny tena: mila mamantatra ny reside antibiotika isika.
Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana Combo amin'ny Betalactam Tetracycline Cefalexin?
Azafady mba jereo ny katalaogy an-tserasera ary mifandraisa amin'ny solontenan'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny mailaka: info@ballyabio.com na fenoy eto ambany ny taratasy fifandraisana:
Ny Name (ilaina)
Ny Email (ilaina)
Ny Phone (ilaina)
Antigén sy Antibodies (8)
Tsena Aziatika (3)
BALLYA Vaovao (4)
Aretina saka (1)
Aretina omby (62)
19 taona (22)
Fambolena ronono (48)
Vokatra vita amin'ny ronono (1)
Fitantanana ny toeram-pambolena (15)
Sakafo ara-tsakafo (2)
Fitaovana fiompiana (3)
Kitapin'ny fitsapana (7)
fitsaboina momba ny biby (3)
Aflatoksin M1 20ppt QuantitativeAflatoxin B1 quantitativeTOKANA iray BT SENSORChloramphenicol 20ppt Quantitative
AboutAvia ho namanayBlogsMeteza ho mpizaraMakà teny tokanaLisitry ny lahatahiry
Coronavirus (COVID-19)Lab EquipmentFitaovana any amin'ny laboratoaraFivoarana lateral (famatsiana IVD)Fitaovana ara-tsiansa
Ora fiasan'ny birao:
Mon.-Zoma. 8:30 - 18:00
5F, Building B, No.241, ShangYe Rd., Huadu, Gunangzhou, Sina
Varotra: +86 20 3947 9163
© copyright 2020 - BALLYA voatokana.
valopytelefaona findaymari-panondro LinkedIn Facebook Pinterest YouTube RSS amin'ny twitter Instagram Facebook-banga rss-banga linkin-blank Pinterest YouTube amin'ny twitter Instagram